८ वर्षे छोरासँग डराउन थालेकी छु, अब नेपाल फर्कन्छु | Jukson
बिनिशा श्रेष्ठ - मेरो आठ वर्षे छोरो मलाई प्रायजसो सोध्छ, “ममी किन हाम्रा सबै आफन्त नेपालमा छन् र हामी मात्रै यता अमेरिकामा छौ ? मलाई किन स्कूलमा ह्वेयर आर यु ओरिजिनल्ली फ्रोम भनेर सोध्छन्, किन हाम्रो छाला ब्राउन छ ? यस्तै यस्तै के के हो के के ?'
जब ऊ ४-५ बर्षको थियो, ऊ सधै परिवारको बारे भ्रमित हुन्थ्यो। आमा तिरको परिवार अनि बुवा तिरको परिवारमा जहिले पनि कन्फ्युज हुने ?
नेपालमा हामी सानो हुँदा कसैले मलाई यस्तो बुझाउनु परेको मलाई याद छैन। हामी स्वत : बुझ्थ्यौ यो मेरो काका,यो मेरो काकी,मामा,माइजु, भान्जा भान्जी ।
प्रवासमा यसरी घर परिवार, नाता गोता, इस्ट मित्रहरु बाट टाढा,यसरी हरेक दिन, न दिन न रात भनि काम गरी गरी यी सब के का लागि ? अलिकति धन र अलिकति वैभवका लागि सोच्न बाध्य बनायो।
आफन्तका खुशीका क्षण होऊन् या पीडाका क्षण.... सँगै नहुनुको पीड़ा जब सम्झेँ तब आफैलाई अपराधी जस्तो लाग्ने ?
नेपाल मै केही गर्ने सोँच पहिले नबनाएको त होइन तर यस्तो लाग्यो कि हाम्रो सानो योगदान देशको लागि ठूलो प्रभाव हुन सक्थ्यो ?
जब छोरोले जब एक दिन मलाई सोध्यो, 'ममी म कति बर्ष भए पछि एक्लै बस्न सक्छु ?'
मेरा धेरै साथीहरु भने मलाई 'तिमी नेपाल फर्क, तिमीसंग नेपाललाई चाहिने सिप छ, नेपालमै राम्रो हुन्छ, यहाँ त्यसको अर्कै महत्व छ' भनेर भन्थे।'
पक्कै पनि अमेरिकामा हुने सुबिधा अनि पूर्वाधार र बिकास को हामी नेपालमा अहिले नै आश गर्न सक्दैनौ ।तर पनि नेपाल फेरि पनि जन्मे हुर्केको ठाउँ हो, छि१ छि१ दुर दुर गर्न मनले मान्दैन।
फेरि मैले यहाँ यस्तो मात्र भन्न खोजेकी होइन कि म अमेरिकामा बसेर दुस्ख पाएकी छु, कमाइमा सन्तुष्ट छैन,अथवा परिवारसंग निरन्तर सम्पर्कमा छैन। तर मलाई डिजिटल सामिप्यता भ्रम लाग्न थालेको छ, नदीमा हाम्फाल्नु अघि लाईफ ज्याकेट लगाए जस्तै।
दाङमा थारू महिलाको दुना–टपरी उद्योग फस्टाउँदै
पोखरामा आफ्नै हजुरआमाको हत्या गर्ने नाती पक्राउ (भिडियो सहित)
जनपद र सशस्त्रको ‘तालमेल नमिल्दा’ टीकापुर घटना